AFGOOYE, Soomaaliya - Wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in diyaarado dagaal ay xalay saqdii dhexe duqeeyeen Gaari BL ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah.
Duqeynta oo la sheegay inay fuliyeen diyaaradaha ciidamada Mareykanka ayaa ka dhacday degaan lagu magacaabo Ukunji, oo ku dhaw Tuuladda Janaale, halkaasi oo ay maamusho Kooxda Al-Shabaab.
Gaariga la duqeeyay oo ah Caasi [HOMY] ayaa la sheegay inuu qudrad, digaag iyo badooyiin kale u waday magaaladda Muqdisho, waxaana ku dhacay gantaal ay soo riday diyaarad dagaal oo Mareykanka uu leeyahay.
Inta la xaqiijiyay hal ruux oo ahady haweenay ayaa ku geeriyootay duqeynta, halka lix kale oo shacab ah ay ku dhaawacmeen kuwaasoo la keenay magaaladda Muqdisho, lana dhigay Isbitaallo.
Sawirro goobta Al-Shabaab kasoo qaadey ayaa muujinaya goobo ganacsi iyo guryo la degan yahay oo tuuladda ku yaalla oo burbur soo gaarey.
Xilliga duqeynta waxaa la sheegay inuu degaanka ka socday howlgal dhulka ah oo ay wadeen ciidamada dowladda Federaalka iyo kuwa Mareykanka, oo bartilmaameedkoodu ahaa saldhigyada Al-Shabaab.
Wali ma jirto wax war ah oo kasoo baxay dowladda Soomaaliya oo ku aadan duqeynta taasoo qeyb ka noqonaysa howlgalka shacab badan khasaarooyin kasoo gaarey oo mudooyinkii dambe ka socda gobolka.
Ciidamada Mareykanka ayaa saldhig ku leh Balli-doogle, halkaasi oo ay ka abaabulaan howlgallada iyo duqeymaha ka dhanka ah degaanada Al-Shabaab maamusho ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Kolonyo la socday Askar katirsan dowladda Federaalka ayaa qabsadey qarax jugtiisa laga maqlay...
Qarax is-miidaamin ah oo ka dhacay Afgooye [Fahfaahin]
Soomaliya 05.08.2018. 14:20